XOG: MD Xasan sheekh oo ku wajahan Magaalada Gaarisa dhulka Somalida kenya..[UJEEDKA] – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
XOG: MD Xasan sheekh oo ku wajahan Magaalada Gaarisa dhulka Somalida kenya..[UJEEDKA]
by Tifaftiraha K24 3rd September 2016 029
Madaxweynaha dowladda faderaalka ah ee Soomaaliya,Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filaya inuu booqasho ku tago magaalada Gaarisa oo xarun u ah gobolka Soomaalida ay ka degto dalka Kenya ee waqooyi bari.
Sida aan xogta ku helnay waxaa lugu sheegay booqashada madaxweynaha inay noqonayso madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed oo Gaarisa taga, lamana ogga wax-yaabaha uu la xiriiro safarka madaxweynaha.
Horey waxuu madaxweynaha u tagay magaalada Jig-jiga oo caasimad u ah ismaamulka Soomaalida degta dalka Itoobiya,halka oo u maalmo ku sugnaa si weyna loogu soo dhaweeyay.
Waxuu tallaabadan oo an horay madaxda sare ee dowladda dhexe looga arag uu qaadaya madaxweynaha xilli ay waqti yar un naga xigto waqtiga la filaya doorashada madaxweynaha inay dalka ka dhacdo.
Aqoonyahanno badan ayaa horey u dhaliilay socdaalkii madaxweynaha ee Jigjiga, kuna macneeyey mid Ethiopia u xalaaleysay dhulka Soomaalida ee ay gumeysato.
XOG: Muran salka ku haya Madaxda sare oo ka taagan Maamulka sare ee Wasaaradda Maaliyadda SOMALIA, Iyadoona…………………………….
War Hada: Dhageyso Xiisad dagaal oo Saakay ka taagan Deegaanada Gobolka Sanaag iyo Maamulka Soomaliland oo ku Hanjabay in ay….
War hada: Shacabka muqdisho oo saameyn xoogan ay ku yeelatay banaanbaxa farmaajo lagu taageeraayo kadib markii ciidamada ay…..
BREAKING: Duqeyn Madaafiic u badan oo Ka bilaabatay Magaalada Baraawe Xili uu halkaasi ku wajahanyahay Ra’isul wasaare Kheyre
Baardheere oo Howlgalkii Ugu Xooganaa ka Socda Iyadoo……
admin 23rd July 2015 27th August 2015